ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/16/12
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:59 PM No comments:
ဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် ၏ သိက္ခာမြင့်လို့ မျက်နှာပွင့်သူ
အသဲနု မသွား ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် (ဇွန် ၁၅ ၂၀၁၂)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:32 PM No comments:
နော်ဝေ နိုင်ငံ အော်စလိုမြို့တော် ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တခဲနက် ထောက်ခံကြိုဆိုကြတဲ့ဂန္တ၀င်ပုံရိပ်များ
နော်ဝေးဘုရင်ကြီးနှင့် နော်ဝေး၀န်ကြီးချုပ်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ညစာစားပွဲဖြင့် တည်းခင်းဧည့်ခံနေစဉ်
ဒေါ်စုအား နော်ဝေးဘုရင်၏ ညစာစားပွဲ မှမြင်ကွင်း from kotunwai on Vimeo.
ငြိမ်းချမ်းရေးချိုးဖြူငှက်ငယ် ရယ် အတောင်ဖြန့် လို့ဝေဟင်မှာဝဲလို့တေးသီကျူးနေတဲ့ 88ကျောင်းသားဟောင်း ကိုမွန်းအောင်
Ye Ni's photo.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:07 PM No comments:
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုအတွက် နော်ဝေး အောစလိုမြို့ မှ ယနေ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ 16.6.2012
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွေ့ ဆုံမဲ့အောစလိုငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ ပိုစတာကပ်ပြင်နေတာကိုအင်္ဂါနေ့ က တွေ့ ခဲ့ရတယ်။၁၆ ဂျွန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဓါတ်ပုံပြပွဲလုပ်မယ်။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်မနက်၁၀နာရီမှာ ပြပွဲကိုဖွင့်ပေးမယ်လို့ 
နော်ဝေ နိုင်ငံ အော်စလိုမြို့တော် ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေကြိုဆိုခဲ့ကြ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့တော်ကို ၁၅ ရက်နေ့က
ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
လေဆိပ်မှာ နိုဘယ်လ်ဆု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Thorbjoern Jagland နဲ့အတူ နိုဘယ်လ်ဆု ကော်မတီက တာဝန်ရှိသူတွေ လာရောက် ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နော်ဝေနိုင်ငံရောက် မြန်မာတွေ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေသာမက၊ အိမ်နီးချင်း ဆွီဒင်နဲ့ ဒိန်းမိတ်နိုင်ငံတွေက မြန်မာနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအ၀င် နော်ဝေးပြည်သူတွေ စုစုပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်လောက်က
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တည်းခိုမယ့် မြို့လယ်က ဂရမ်ဟော်တယ်မှာ
နော်ဝေ စံတော်ချိန် ညနေပိုင်းမှာ ရောက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဟာ သားအငယ် ကင်မ်နဲ့အတူ ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကြိုဆိုနေတဲ့ နော်ဝေးရောက် ကိုညိုက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာတဲ့အခါမှာ ရဲလုံခြုံရေး အမျိုးသမီးတွေရော အမျိုးသားတွေရော အဲဒီမှာ လမ်းတွေဘာတွေကို ရှင်းပေးပြီးတော့မှ ဟိုတယ်ကို တန်းပြီးတော့မှ ကားပေါ်ကနေ ဟိုတယ်ထဲကို ခေါ်သွားဖို့ လုပ်တာပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ တိုင်းရင်းသား ကလေးလေးတွေက သူတို့ ရိုးရာ ၀တ်စုံလေးတွေနဲ့ ပန်းစီးလေးတွေကိုင်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာရင် ပန်းစီဆက်ဖို့ ပြင်ထားကြတာပေါ့။ ကားလာတဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကလေးတွေ ကြိုတဲ့နေရာကို ချက်ခြင်းမသွားဘဲနဲ့ ဟိုး လမ်းဘေးတဖက်တချက်မှာ ရှိတဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေ
အနားကို သူက လုံခြုံရေးတွေကို ဟိုဘက် ခဏသွားအုန်းမယ်ဆိုပြီး သွားလိုက်တာ လူတွေက အရမ်းဝမ်းသာသွားကြတာ၊ ပျော်ပြီးတော့ တခါထဲ အမေစု အမေစု ဆိုပြီးတော့ ၀ိုင်းပြီး နှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့ဗျာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း လူတွေအများကြီးကို တော်တော်လေး နှုတ်ဆက်ရှာတယ်ဗျာ။ လူအများကြီးကိုလေ။ သားအငယ်ကလည်း ပါတယ်ဗျာ။ ကင်မ် လေ။ သူကလည်း လိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်တယ်။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ်တ၀ိုက် လုံခြုံရေးတွေကိုလည်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားတယ်လို့ ကိုညိုက ပြောပါတယ်။
မနေ့ညက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ နော်ဝေ ၀န်ကြီးချုပ် တည်းခင်းဧည့်ခံတဲ့ ညစာစားပွဲကို နော်ဝေဘုရင်နဲ့ တော်ဝင်မိသားစု ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု
ကို ရာစုနှစ် ၂၀ကျော်မှ ကိုယ်တိုင်လက်ခံယူမယ့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား
ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:43 AM No comments:
ကီးဒို တယ်လီဖုန်းဖြင့် ရိုက်ယူထားသော ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည် ။
ကျွန်တော့ ကင်မရာမှ မှတ်တမ်းများမှာ ရုပ်မြင်သံကြား အဖွဲ့ တခုမှ လိုအပ်သည့် အကွက်များဖြတ်ယူပြီး
တမ္ဘာလုံးပြသရန် အကူညီတောင်းလို့ ပေးထားပါသည် ။
ပြန်ရလျှင် အမြန်ဆုံး တင်ပေးပါမည် ။
အရင်နှစ် က နိုဘယ်ဆုယူနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိသားစု များကို တွေ့ ရစဉ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:37 AM No comments:
အမေစုကို ဥရောပရောက် မြန်မာပြည် မိသားစုများမှ နံက် ၁၂ နာရီ ဝန်းကျင်မှ စတင်ပြီး တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံများ အိုးစည်ဒိုးပတ်ဝိုင်းဖြင့် ကြိုဆိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည် ။ ညနေ ၅ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် လုံခြုံရေး ကားများ ဝန်းရံပြီ ဟော်တယ်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည် ။
အမေစုသည် ကားပေါ်မှ ဆင်းသည်နှင့် လုံခြုံရေးများက ဟော်တယ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် လမ်းရှင်းပေးခဲ့သည်ကိ်ု
အမေစုမှ လာရောက်ကြိုဆို ဂါရဝပြုကြသော မြန်မာပြည်သားများကို လုံခြုံရေး အတားအဆီးများကြားမှ ဟော်တယ်ထဲသို့မဝင်သေးဘဲ ကြိုဆိုနေသော မြန်မာပြည်မိသားစုများဆီသို့တက်ကြွစွာဖြင့် တဦးချင်း လက်ဆွဲနှတ်ဆက်ပြီးမှ ဟော်တယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါသည် ။ အမေစု၏ မောတ္တာ ဂရုဏာအပြည့်ပါသော လက်ဖြင့် နှတ်ဆက်သူအားလုံး ရင်ထဲမှာ မဖေါ်ပြနိူင်သော ခံစားမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီး မျက်ရည်များ ကျလာကြသည်ကို မြင်ရသူတိုင်းလည်း ထိုခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ခဲ့ကြရပါသည် ။
by Htay Tint on Saturday,
June 16, 2012 at 4:09am ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:25 AM No comments:
ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေးချိုးဖောက် မှု ဆိုင်ရာ သဘောထားစစ်တမ်း
ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ (ဘယ်လိုနာမည်တပ်ထားသလဲ မသိပါ) တွေက အခုလိုမျိုး တင်းကြပ်ချုပ်ချယ် ကန့်သတ်နေတာကိုက ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေ ဖွဲ့စည်းဖို့ အရှိန်ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ကောလိပ်တွေမှာ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားသူတွေဟာ လူငယ်တွေပဲ ဖြစ်ကြလို့ လူငယ်တို့ရဲ့ တစိုက်မတ်မတ် အားမာန် တက်ကြွမှုနဲ့ မျှော်လင့်ကြီးမားမှုကို လေးလေးစားစား အသိအမှတ်ပြုပြီး ဆက်ဆံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ဒီအချက်ကို အလေးအနက် ထားနိုင်ရင် ပြဿနာတွေ မရှိသလောက်ကို ဖြစ်အောင် စီမံ အုပ်ချုပ် ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ အစိုးရကလည်း ဒီအချက်ကို သဘောပေါက်ထားသင့်ပါတယ်။
ခေတ်စနစ်နဲ့အညီ တိုင်းပြည်က လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲလာတာကို ခွင့်ပြုရပါမယ်။ ပြောင်းလဲမှုကို ဟန့်တားပိတ်ဆို့ရင် တည်ငြိမ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သိပ်မခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် မလုပ်စေချင်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြမ်းဖက်လာပြီဖြစ်လို့ မြန်မာတွေဘက်ကလည်း တဦးချင်းကအစ ပြင်ဆင်ကြစို့
နိုင်ငံတခုရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးပြီး နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်ဖို့ထိ အန္တိမပန်းတိုင် ရည်မှန်းထားတဲ့ ပြည်ပ ကျူးကျော်သူတွေတွေဟာ အနုနည်းရော အကြမ်းနည်းရော နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး တဆင့်ပြီးတဆင့် အတင့်ရဲရဲ လုပ်ဆောင်လာရာမှာ သေချာပေါက် ရှိပါတယ်။
လက်တွေ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတခု ရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက်၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနိုင်ငံ ပိုင်နယ်ထဲက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အခြေစိုက်ရင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်လာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဘင်္ဂလာဒက်ရ်ှနိုင်ငံထုတ် မီဒီယာ တခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဝံသာနု Website က အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ပြန်ဆိုထားတာကို ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
Bengali Rohingya has been planning the Violent Riots in Rakhine State since last six months
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ညံ့ရင် ခံရမှာပဲ။
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေဟာ ---
ဘာသာရေး သွေးခွဲတာ၊ လူမျိုးရေး သွေးခွဲတာ၊ လူတန်းစား သွေးခွဲတာ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဂိုဏ်းဂဏ သီးခြားဖွဲ့စည်းထားတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး စည်းလုံး ညီညွတ်ကြရပါမယ်၊
အမျက်ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ရင်း ဆင်ခြင်တုံတရားထားပြီး အမြော်အမြင် ရှိကြရပါမယ်၊
မိမိတို့အလုပ်တွေအပေါ်မှာ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြရပါမယ်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်စပ်လာနေတာကြောင့် ပိုမို တိုးတက်လာအောင် အရည်အချင်း မြှင့်တင်ကြရပါတော့မယ်။
လိုအပ်ရင် မိမိတို့ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ စိတ်ဓါတ် (ဆန္ဒ + အပြုအမူ) ကို ပိုမိုကောင်းမွန် သင့်လျော်စွာ ပြုပြင် ကျင့်ကြံနေတတ်ရပါမယ်၊
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ကူညီပေးကြရပါမယ်၊
တနိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းကြရပါမယ်၊
ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းရေးကို မျှော်မှန်းထားကြတဲ့ လက်ရှိ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေကို တသွေမတိမ်း ခံယူနိုင်ရပါမယ်၊
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ စည်းမျဉ်းတွေကို လက်ရှိ ခေတ်စနစ်နဲ့အညီ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင် ကျင့်သုံးနိုင်ရပါမယ်၊
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို အားလုံးက ခံယူကြရပါမယ်၊ (Rule of Law ဟာ လူတိုင်းက တရားဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာကြရတာ၊ တရားဥပဒေနဲ့အညီ စီမံအုပ်ချုပ် စီရင်တာကို ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒါဆို ကျနော်တို့ဟာ ပြည်ပကျူးကျော်သူတွေအပေါ် အောင်ပွဲဆင်နိုင်ပါမယ်။
ပြည်ပခိုးဝင်သူမှန်သမျှကို တားဆီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း နိုင်ငံတခုရဲ့ အခြေခံ ဝိသေသ လက္ခဏာကောင်းတွေနဲ့အညီ တည်ငြိမ် အေးချမ်းစွာ တိုးတက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
June 15, 2012 at 1:47pm ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:00 AM No comments:
အမေစု အော်စလို ရောက်ပြီ **
ဇွန် ၁၅ ရက် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုလေဆိပ်ကို ရောက်ရှိသွားပြီး နော်ဝေနိုဘယ်ကော်မတီ ဥက္ကဌ Thorbjoem Jagland (ယာ) နဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရလူကြီးများ လေဆိပ်မှာ လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အော်စလိုမှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကို လက်ခံရယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုဗယ်ဆု ပေးပွဲ အခန်းအနားကို ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ စနေနေ့ည စကာင်္ပူအချိန် (၇) နာရီအချိန်တွင် အောက်ပါ လင့်မှ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် 5နာရီခွဲတွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
အမေ့ကို အားပေးကြရအောင်... from kotunwai on Vimeo.
ဒေါ်စု ဂျနီဗာ ရောက်ရှိ from kotunwai on Vimeo.
Statement by UK Organizations with regards to the ethnic cleansing of Burmese and Arakanese (Rakhine) by the extreme terrorist Rohingya Bengali aliens
We the signators below condemn the burtal violent killings, lootings and burning of villages of Buddhist Burmese and Arakanese (Rakhine) by the so-call Rohhingya Bengali Muslims. These so-called Rohingyas are illegal Bengalis who entered from Bangladesh. These so-called Rohingyas have killed Buddhist Rakhine (Arakanese), and Burmese.
Maungdaw Township, located in western Burma, borders Bangladesh is now occupied by 98 percent Bengali Muslims. On June 8th, 2012, the so-called Rohingya Muslim Bengalis torched and killed Buddhist Rakhine (Arakanese), and Burmese minorities, who were living peacefully in Maungdaw Township. Also Buddhist villages were burned, Buddhist households were plundered and Buddhist monasteries were destroyed. There Buddhist Burmese and Arakanese (Rakhines) are having to hide to escape the attacks by the so-called Rohingyas.
According to the reports reveived not only were there over (20) villages burned to ashes by the so-called Rohingyas Bengali Muslims, but they also searched and killed Buddhist Rakhines (Arakanese) and Burmese. According to the latest news, dozens of Buddhist Rakhaings (Arakanese) and Burmese have been killed and thousands have fled.
We strongly condemn the brutal actacks made by the so-called Rohingya. We demand President U Thein Sein to protect the lives and belongings of the Buddhist Burmese and Arakanese (Rakhines), inadecisive manner. We demand the government of Burma to takeaclear and decisive path to the prevention of unlawful entry, ethnic cleansing, and violent acts perpetrated by the so-called Rohingya Bengali Muslims. We encourage all elected parliamentary members to oppose the unlawful demands for Burmese citizenship made by the so-called Rohingyas who have entered illegally. We appeal to Burmese democratic organizations, and ethnic groups, to vehemently condemn the actions committed by the so-called Rohingya terrorists.
We seek to persuade the Burmese media abroad to stop their bias reports in support of, and praise of, the so-called Rohingyas. We demand, and request, that the international media stop reports which are only in support of the so-called Rohingyas. We request the international community stop their support of the so-called Rohingya extremist terrorists. We demand the so-called Rohingya to refrain from claiming to the world that they areaBurmese ethnic group. Let it be known the Rohingya issue is notaHuman Rights violation in Burma but an unlawful trespass by Bengali Muslims.
We, the undersigned, heartily welcome the clear and decisive statements made below by leaders of the 88 Generation Students with regard to the so-called Rohingyas; We support the following comment made by 88 Generation Students;
“We warmly welcome working hand-in-hand together with all democratic forces, and the military of Burma, to solve the Rohingya issue asanational crisis.”
We support the following comment made by 88 Generation Students;
“During our National Reconcilation period in our country, we have been patiently avoiding the Rohingya issue. But to make it clear, regarding this Rohingya matter, that Rohingyas are absolutely notanationality of Burma. We absolutely do not accept the interfering intrusion by the international community into the Maungdaw–Buthidaung incident without their full understanding of the domestic affairs of Burma; we consider it to beaviolation to the sovereignty of our country. We will not agree to, nor comply with, nor accept them as destitute refugees, nor placate and appease the pressures of the international community. If the pressures persist we, and the democratic forces, will work hand-in-hand with the Myanmar military to resolve this as our National Affair issue.”
“The incident we have now is not an issue between Burmese Muslim and Buddhists. It is insidious to characterize this as an issue of race or religion. The suffering of Rakhine (Arakanese) ethnics for many years must be deeply considered. We have endured this Rohingya issue foralong time. While working hard during the time of the National Reconciliation Period, we, the 88 Generation Students, have with the utmost patience avoided many arguable matters, unless they were unavoidable. Now let's be clear about the Rohingya. Rohingyas are notanationality of Burma. We consider the Maungdaw-Buthidaung incident to beamatter of Rohingyas crossing the border illegally encouraged by foreign players. We consider the involvement of the international community regarding Rohingya matters, without the full knowledge and understanding of Burmese nationals, to be directly damaging to our country.”
We appeal to the world leaders, and the international media who respects the truth, to join us in condemning the ethnic cleansing, burning of villages, looting of personal possessions--and land--of the Buddhist Rakhine (Arakanese), and the Burmese people, by the so-called Rohingyas.
We encourage all citizens of Burma to work together asanation in combating the aggression of the extremist terrorist Rohingyas.
Burmese Christian Society in UK
Arakan League for Democracy –Exile (ALD-UK)
National League for Democracy (NLD-LA-UK)
Oxford Burma Benefit Fund
Shan Progressive Society
Chin Democratic Community
Burmese Students in UK
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:42 AM No comments:
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရိုဟင်ဂျာ အရေး ဝန်ခံလိုက်ပြီ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Mrs, Dipu Moni ကိုယ်တိုင်လွတ်တော်တွင်
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ကို Jamaat-e-Islam က လက်နက်များ တပ်ဆင်ပေးကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလီ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Jamaat-e-Islam က ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ပေးနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခနဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားအောင် လှုံ့ဆော်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြာရေး ၀န်ကြီး ကိုယ်တိုင်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီသတင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တိဗီသတင်းမှာအမြဲလွင့်နေပါတယ်
(ထိပ်တန်း သတင်းဌာနကြီးဖြစ်တဲ့ Bangla News 24 မှာ သတင်းဖော်ပြထားသည်)
အိုဘားမားအစိုးရက တရားမ၀င်နေထိုင်တဲ့ လူငယ်တွေကို နှင်ထုတ်ခြင်း ရပ်တော့မည်
** အိုဘားမားအစိုးရက တရားမ၀င်နေထိုင်တဲ့ လူငယ်တွေကို နှင်ထုတ်ခြင်း ရပ်တော့မည် **
အမေရိကန်နိုင်ငံကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာတဲ့ အသက် ၁၆ နှစ် နဲ့ ၃၀ နှစ်ကြား လူငယ်တွေဟာ အမေရိကန်မှာ ငါးနှစ်ဆက်တိုက် နေထိုင်နေခဲ့ရင် အရင်လို တိုင်းပြည်ကနေ နှင်ထုတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ တရားဝင်နေထိုင်သွားနိုင်တော့မယ်လို့ အိုဘားမားအစိုးရက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဥပဒေအသစ်က ချက်ခြင်း သက်ဝင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေ လူပေါင်း ၈ သိန်းလောက် အကျုံးဝင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန် ဘန်းမြို့တော်က နှင်းဆီဥယျာဉ်မှာ ..
အော်စလိုကို ရောက်လာမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ..
နော်ဝေကို ရောက်လာမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို စောင့်ကြိုနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦး ...
Myitkyina Online မှ ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါတယ်.....။